Puntland iyo Galmudug oo ka soo horjeestay heshiiska shidaalka ee Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntland iyo Galmudug oo ka soo horjeestay heshiiska shidaalka ee Soomaaliya
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug ayaa kasoo horjeestay heshiiska shidaalka ee Soomaaliya.
Kulan ay ku yeesheen magaalada Gaalkacyo maanta oo Arbaco ah madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug, ayay kaga soo horjeesteen sharciga.
“Dowladaha Puntland iyo Galmudug waxay ummada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ku wargelinayaan in aysan qayb ka ahayn, waafaqsaneyna sharciga batroolka,” ayay ku sheegeen war-saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen maanta.
Waxay intaas ku dareen in aysan qayb ka noqon doonin wixii go’aano masiiri ah oo dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah aysan ka gaarin wadatashi.
Asbuucaan, baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa meelmariyay sharciga shidaalka.
May 22, 2019 Madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug oo kulan ku yeeshay Gaalkacyo
Madaxweynaha Puntland oo isku shaandeyn balaaran ku sameeyay agaasime waaxeedyada maamulka iyo maaliyada ee wasaaradaha
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa isku shaandeyn balaaran ku sameeyay agaasime waaxeedyada maamulka iyo maaliyada ee wasaaradaha. Digreetada isku shaandeynta ah ee kasoo baxday xafiiska madaxtooyada maanta oo Khamiis ah ayaa saameyn [...]